what happen my blog? — MYSTERY ZILLION
what happen my blog?
May 2009 edited May 2009 in Blog
ကျွန်တော့ blog ကို Firefox နဲ့ ကြည့်ရင် template တွေက အဆင်ပြေတယ်။ Internet Explorer နဲ့ ကြည့်ရင် template တွေက အစီစဉ်မကျတော့ဘူး။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲ။ ကူညီဖြေရှင်းပေးပါအုံးဗျာ
ဖြေက ရှင်းပါတယ်.... Ie မကောင်းလို့..... အကောင်းအတိုင်းလေး မြင်ချင်တယ်မလား..... တသက်လုံး ie နဲ့မကြည့်နဲ့.... :d:d:d အလကားနောက်တာ ie 8 နဲ့ကြည့်ကြည့်ပါလား.... ရမှာပါ.... ၈ နဲ့စမ်းကြည့်ပါဦး...
အင်း .. ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ များတယ်လို့ပြောရမယ်ထင်တယ် .. ကျွန်တော်လည်း အခုတလော ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူး .. IE7 နဲ့ကြည့်လိုက်ရင် .. မပြည့်မစုံတာတွေကများတယ် .. ဒါတောင်အကုန်နီးပါး.. လိုတာတွေတင်ပေးထားတာ .. Script error တွေလို့တော့ ထင်တာ.. Gmail တောင် .. standard mode နဲ့၀င်တာ .. မရဘဲတစ်ခြား .. Browser တွေနဲ့လည့်သုံးနေရတယ်.. ကျော်ရင် ပိုဆိုးလားမသိဘူး .. လောလောဆယ်တော့ .. Chrome နဲ့ သုံးနေပါတယ်
CSS compatible မဖြစ်တာထင်တယ်။ တခါတလေ IE6 နဲ့ OK တယ် IE7 ကျ ရွဲ့စောင်းကုန်တာတွေရှိတယ်။ Firefox နဲ့ကအဆင်ပြေလေ့ရှိတယ်။ Style sheet ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ထင်တာပဲ။ Browser သာပြောင်းကြည့်ပါဗျာ
this is also happened to me.
because of the "PR of google"
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ..google ကလည်း firefox နဲ့တော်ချိတ်ထားသလားတောင်ထင်ရတယ်နော်..Microsoft နဲ့ရန်ဖြစ်ထားတယ်ဗျ
အဲဒါက IE6ဖြစ်ခဲ့ရင် ie6.css ကို သုံးခိုင်းတာပဲ။ ပြန်ပြီး fixed လုပ်တာပေါ့။ အဲလိုမျိုးလေးတွေ သုံးရတာမျိုးလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
Inn.........!!!!!!! ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းရဲ့ blog က ဘာနဲ့ပဲဖွင့်ဖွင့် ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဗျာ... ကျွန်တော် blog ကျမှ ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဗျာ Template မှာလိုလို့လားမသိဘူး...:((